Ngakho-ke, namhlanje sinawe ukuthola ukuthi ingane elandelayo yenkampani "i-Nokia" iyini. Kungenxa ye-smartphone ye-Lumia 735. Leli fayela livele emakethe yobuchwepheshe besimanje maduzane (cishe ngonyaka odlule). Kuphela manje kusukela kulokhu smartphone ivame ukukhangiswa. Futhi kuyo yonke indawo: kwi-Inthanethi, nasemaphephandabeni, naku-TV. Kodwa-ke, ngokusho kwamanye amathengisi kunzima kakhulu ukwahlulela ukuthi iyiphi ifoni. Emva kwakho konke, kukhona wonke amamodeli, ngisho nezinto ezingabalulekile kakhulu, ezethulwa njengezingcingo ezinhle kakhulu ze-Smartphones. Ngakho-ke namhlanje sizozama ukuqonda okulungile ngempela (noma okubi) ku-Nokia Lumia 735. Ukubuyekeza mayelana nale nqubo, eqinisweni, kusanda kutholakala kakhulu. Bakhuluma ngani? Futhi ingabe imibono eshiywe amakhasimende amaningi kwiWide Web Wide kuyiqiniso?
Mhlawumbe, izinkomba ezibaluleke kakhulu lapho ukhetha i-smartphone yinkqubo kanye nesistimu yokusebenza efonini. Into yukuthi kuncike ekutheni kunamandla kangakanani futhi okusheshayo, futhi kuyobe kulula kangakanani ukuhamba ifoni. I-Lumia 735, njengemikhiqizo eminingi ye-Nokia, ingenye yezindlela ezinhle kakhulu. Phela, lawa mafoni ayashesha, enamandla nekhwalithi.
Ngaphakathi kwe-smartphone yethu yanamuhla yiprosesa enhle. I-core-4, enevolumu yewashi ye-1.2 GHz. Eqinisweni, lokhu kuyinkomba ebonisa ifoni. Noma kunjalo, ijubane lomsebenzi walo i-Lumia 735 aliphansi kunamamodeli aneprosesa enamandla kakhulu. Ngokuyinhloko, lesi sibonakaliso sinelungelo lomsebenzi ngesikhathi esisodwa ne-intanethi, isidlali somculo, kanye nezinhlelo eziningana nemidlalo (cishe izingcezu ezingu-10). Ngakho ungaqiniseka, i-Lumia 735 LTE yilokho okudingwa ngumsebenzisi wanamuhla.
Futhi, inzuzo enkulu yale modeli yukuthi uhlelo lokusebenza luhlukile kuma-Smartphones avamile. Konke, kusekelwe ku-Windows. Futhi kubizwa ngokuthi kufushane futhi kucacile - Windows Phone. Ku-Lumia 735 kufakwe inguqulo engu-8 yalesi simiso sokusebenza. Uma uthatha ifoni esandleni, ungabona ukuthi i-interface "i-OSes" ayifani neze neyekhompyutheni "Windows 8". Lokhu kuvumela i-smartphone ukuthi ihlale nganoma yisiphi isikhathi i-multifunctional futhi inamandla.
Isibonakaliso sesibili esibalulekile okumelwe sicatshangelwe ukubonisa kwe-smartphone. Emva kwakho konke, uvame ukuthi unesibopho sekhwalithi yesithombe, kanye nemibala edlulisiwe esikrinini. Ngaphezu kwalokho, ukubonisa okuhle kungakwandisa impilo yefoni isikhathi eside. Phela, kuma-Smartphones ashukumisayo, idlala indima ebalulekile. Ungasho ukuhamba okuyinhloko ohlelweni lokusebenza.
I-smartphone ye-Nokia Lumia 735 ifakwe isikrini esihle kakhulu. Ngokuyinhloko, njengezinhlobo eziningi ze-Nokia. Imibala edluliselweyo imane imangalisayo - yebo, ikhanya futhi igcwele. I-smartphone yethu isekela ukudluliswa kwemibala eyizigidi ezingu-16. Lokhu kuyinkomba ejwayelekile yoma yimuphi umphumela, kodwa noma kunjalo, abathengi abaningi basasebenzisa amakholi angenakukwazi ukuziphatha okunjalo nokuhlukahluka.
Isikrini se-Diagonal Lumia 735 sinesilinganiso esihle-4.7 amasentimitha. Ngokuyisisekelo, ungabiza ngisho nalesi simodeli esingajulile. Phela, amaningi ama-smartphones manje atholakala nge-diagonal of 5 intshi. Noma kunjalo, lokhu akuvimbeli i- "Nokia" ekubeni yifoni elula. Isinqumo sesiboniso se-OLED siphakeme - 1280 ngamaphikseli angu-720. Kuyindlela enhle yokubuka ama-movie aphakeme kakhulu ngefomethi ephelele ye-HD. Mhlawumbe, lelo thuba litholakala kuma-smartphones amaningi anamuhla.
I-Lumia 735, ukubuyekezwa kuvame ukuqala ngencazelo yokuklama nokubukeka kwedivayisi. Futhi, njengoba kungazwakala, le nkhomba ibonisa indima ebalulekile ekukhetheni ucingo. Wonke umuntu ufuna ukuhambisana nezikhathi, futhi ulandele imfashini. Ngakho-ke, kufanele sibheke i-smartphone enhle neyokuqala.
Ngenhlanhla, imodeli yethu yanamuhla ibhekwa njengento ehlelekile. Futhi, yebo, ekhanyayo. Into ethi umbala wombala we-Lumia 735 uhlukile. Lapha ungathola nemibala yendabuko (ezimhlophe, ezimnyama, ezimpunga) nezangempela (kusuka ku-orange kuya ku-acid-pink noma i-acid-yellow). Ngakho le foni ingakhonsa njalo amakhasimende.
Ngaphezu kwemibala ekhanyayo, ukuklanywa jikelele kuhambisana nokunambitha. I-minimalism enjalo (ngaphandle kokuziqhenya nezinye "izinsimbi kanye namacilongo") ngamakhonksi ahlehlisiwe. Eqinisweni, lokhu akuyona into umuntu ayithandayo. Ngempela, izingxenyana ze-Windows Lumia 735 Windows zingabizwa ngokuthi i-bulging kancane. Akuyona elula kakhulu. Ikakhulukazi uma usetshenziselwa ukugqoka ifoni ebhulukwe noma amabhulukwe ephaketheni lakho. Kodwa, ukwethembeka, ngezinye izikhathi ungakwazi ukuya emihlatsheni encane ukuze uthenge smartphone ephezulu.
Ngaphezu kwalokho, ukubuyekezwa kwe-Lumia 735 kunomqondo omuhle mayelana nokuklama nokuthi iqiniso le foni linamandla okushintsha amapaneli. Ungakwazi ukudala kalula futhi kalula ukuklama kwakho - thola iphaneli ngokuphrinta noma isithombe, esikhundleni salowo osuvele usethwe ku-Nokia, bese uyajabulisa umphumela. Okunconywa ngokukhethekile yizinto ezihlukahlukene ze-silicone - ngokuvamile zikhazimulayo futhi zinhle. Yebo, futhi ingavikela ifoni yakho ekulimaleni okungadingekile.
Kubalulekile futhi ukunaka inani lememori efonini. Kungaba izinhlobo ezimbili - ukusebenza nokujwayelekile. Uhlobo lokuqala lubophezele ukusebenza kwe-system, futhi okwesibili - ngenani lwazi olugcinwe kwi-smartphone nedatha. Uma ngaphezulu lezi zibalo, kungcono.
Yiqiniso, ukubuyekezwa kwe-Nokia Lumia 735 ngokuphathelene ne-RAM kuxubene. Into yukuthi le modeli ine-1 GB ye-RAM kuphela. Futhi, njengomthetho, lo mthengi wanamuhla akwanele. Amafoni amaningi athandwayo ama-smart nge-2-4 GB we-RAM. Noma kunjalo, ngisho nevolumu enjalo, ehlangene neprosesa enamandla, yenza i-smartphone "Lumiya 735" ingabi nakakhulu kunabanye abafana, abanamandla kakhulu.
Ngenkumbulo evamile, konke kungcono kakhulu. Ngemuva kwakho konke, ekuqaleni ku-Lumia 735, ukubuyekezwa kwalokhu okushiwo ukunakekelwa kwethu, kuhlanganisa u-8 GB wesikhala samahhala. Noma kunjalo, umthengi wabo uzotholakala kuphela ama-gigabytes angu-7 kuphela. Okunye kusetshenziswe ohlelweni lokusebenza kanye nezinsiza zalo. Ngokuyisisekelo, ukuqala lokhu kwanele.
Kuphela manje, ekugcineni, kuzofika isikhathi lapho kuzodingeka uzizwe ukungabi khona kwesikhala. Ngempela, umculo, ama-movie, izinhlelo zokusebenza namageyimu manje "kuhle kakhulu". Futhi ngakho kufanele sicabange ngendlela yokwandisa isikhala samahhala. Amakhadi okukhumbula akhona. Ngenhlanhla, i- Lumia 730/735 ine-slot yohlu oludumile kakhulu lwememori eyengeziwe - i-microSD. Futhi ungafaka ku-smartphone yakho ikhadi elifinyelela ku-128 GB. Ngokuqinisekile kuyokwanela iminyaka eminingi. Futhi akudingeki uhlanze njalo ifoni yakho yamafayela angadingekile, izinhlelo zokusebenza, izithombe nemidlalo.
Umsebenzi oyinhloko we-smartphone ukuxhumana. Ngakho, lesi sici sithinta kakhulu ukuthandwa kanye nekhwalithi yezimpahla. I-Lumia 735, intengo ejabulisa abathengi abaningi, ukwethembeka, kubhekwa njengedivayisi enhle kakhulu, ethatha ngokugcwele isignali ngisho nasezindaweni ezikude kakhulu.
Kodwa ukuxhunywa kwefoni lokhu kuxhumano luni? Okokuqala, kukhona i-GPS ne-GPRS. Futhi, ungakwazi kalula futhi kalula uxhume kwinethiwekhi ye-3G. Ikhwalithi yokuxhumana lapha ihle kakhulu. Kulula ukuqinisekisa - kwanele nje ukuphuma efonini kuWebhu Lomhlaba Wonke. Futhi uzoqaphela ukuthi isignali ye-3G ibamba i-Lumia 735 kahle kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, lo modeli unesisekelo sokuxhumana okungu-4G. Lesi sici asikho kuwo wonke ama-smartphone. Noma kunjalo, manje abakhiqizi bazama ukukhulula amafoni wabo ngokusekelwa kwe-4G. Lolu hlobo lwesignali lubhekwa njengento esheshayo, ephezulu futhi enokwethenjelwa. Yilokho okudingayo ukuhlala uxhumane nomndeni nabangane.
Ngaphezu kwalokho, ngaphezu kwalezi zinhlobo zokuxhumana, i- "Lumiya 735" inezinsizakalo ze-Wi-Fi, kanye ne-Bluetooth. I-last, ngendlela, ine-version entsha-4.0. Ngalo, ungahambisa ngokushesha futhi kalula idatha kusuka efonini kuya kwenye ngaphandle kwezintambo. Yiqiniso, ungakhohlwa mayelana nokuxhumana kwe-USB. Ekucubungulweni okujwayelekile kwedivayisi uzonikezwa ngekhebula ukuvumelanisa imishini ngekhompyutha yakho.
Smartphones zanamuhla zingamadivayisi amaningi. Bakwazi ukufaka esikhundleni sekhamera, iwashi le-alamu, ikhamera nezinye izinto eziningi. Kuphela lapha ukuze uqoke kahle futhi ufanelwe kuwo wonke ama-parameters efonini kunzima ngokwanele. Ngokuvamile ikhwalithi empofu yezithombe noma ukungabi khona kwekhamera kungalimaza kakhulu idumela lomkhiqizi we-smartphone.
Ngenhlanhla, i-Nokia Lumia 735 ukubuyekezwa ngalokhu kulungile ngempela. Into yukuthi kulo modeli kukhona amakhamera amabili - ngemuva (ngemuva) nangaphambili. Iyokuqala isetshenziselwa ukudubula ividiyo bese ithatha izithombe ngendlela evamile, ejwayele amakhasimende amaningi. Kodwa ingaphambili yayenzelwe izingxoxo ze-selfi nevidiyo. Ikhwalithi kokubili amakhamera ayiyimbi, kodwa ngezinye izikhathi kungcono. Isibonelo, ikhamera yangemuva ine-6.7 Mp, futhi ikhamera yangaphambili ine-5 Mp. Ukuze uthembeke, ikhamera yangaphambili impela izinga eliphezulu kakhulu. Futhi leli qiniso lijabulisa abathengi abangakwazi. Kuphela lapha imodi evamile ayikho izinga eliphakeme kakhulu. Cha, izithombe ezithathwe ikhamera yangemuva zizoba zinhle kakhulu, zikhanyane futhi azilibaleki. Ama-megapixel kuphela lokhu okukhethwa kukho okuphansi kunamanye amagajethi. Manje ungathola ama-Smartphones ngekhamera yangemuva yama-megapixel angu-13. Kodwa-ke, uma uqhathanisa izithombe ezithathwe kule gadget, nakuLumia 735, umehluko awunakwenzeka ukubona.
Phakathi kwezinye izinto, ku-"Lumiya" kune-flash futhi i-autofocus. Lokhu kusiza ukwenza izithombe eziphezulu, futhi ukudubula amavidiyo amahle ngaphandle kwesahlukaniso, ukufiphaza nezinye izinkinga. Yebo, awutholi ikhwalithi ye-Full-HD, noma kunjalo uzothola amavidiyo amateur aphezulu kakhulu futhi aphezulu.
Inkinga yaphakade yamafoni wanamuhla ibhethri. Ku-Smartphones, njengomthetho, ukushaja kwebhethri kuphela ngokushesha hhayi ngesikhathi. Ngakho-ke, abathengi abaningi banakekelwa ngalesi sibonakaliso. Uma isikhathi eside ifoni isebenza ngokusebenzayo, ngcono.
Empeleni, lokhu kulungile. Kuphela lapha akuwona wonke umkhiqizi ongaphumelela kulo mphumela. "I-Nokia" ibilokhu idumile ngamafoni omculo asebenza isikhathi eside. Futhi i-Nokia Lumia 735, izibuyekezo esizifunda njengamanje, azifani.
Okuncane okucacile. Kumodi yokulinda, le divayisi isebenza cishe izinyanga ezimbili. Kodwa lokhu kunikezwa ukuthi ngeke usebenze ngefoni, phendula izingcingo, sebenzisa iwashi le-alamu nokunye. Kuyisenzakalo esingavamile, akunjalo? Ngakho-ke, ngokuvamile amakhasimende asebenzisa i-smartphone kuphela ngenhloso ehlosiwe - abiza futhi aphendule abantu. Kulokhu, "uLumiya" uzosebenza amasonto amathathu. Kodwa uma usebenzisa le divayisi ngentshiseko, ungabala kuphela ngesonto lomsebenzi ngaphandle kokuvuselela. Empeleni, ukusebenza kahle kakhulu kumodeli yocingo yanamuhla. Yebo, futhi okunjalo kuyinkimbinkimbi futhi inamandla.
Esinye isici se-Lumia 735 yishaja. Ama-smartphones amaningi manje anesixhumi esivamile sokushaja. Kodwa hhayi efonini yethu. Ngempela, "i-Nokia Lumiya" inokushaja nge- wire Qi ejwayelekile. Ukuthembeka, lokhu kuyiqiniso kuphela "Lumiya 735". Awekho ama-analogues wejaja engenantambo kwezinye izibonelo ze-Smartphones eziye zaphawula. Eqinisweni, kulula kakhulu. Yebo, futhi ukhokhise ngokugcwele imodeli yethu yamanje mayelana nehora. Futhi ungasebenzisa ifoni futhi ngenhloso ehlosiwe hhayi nje kuphela.
Uhlu lwamanani - esinye isibonakaliso esibalulekile lapho ukhetha inqubo. Akekho ofuna ukukhokhela izimpahla ngaphezulu. Ikakhulukazi uma ungakhetha u-analog eshibhile. Kuphela ku-Nokia Lumia 735 ukubuyekezwa kuthola okungaqondakali kulokhu. Abanye abathengi bathi imodeli iyabiza kakhulu futhi ayifanele imali. Futhi omunye uthi ngenye indlela. Futhi lokhu ukuziphatha okujwayelekile kumthengi wanamuhla.
I-Nokia Lumia 735 intengo isilinganiso. Akukwazi ukusho ukuthi liphakeme kakhulu noma liphansi kakhulu. Ngamanye amazwi, ngaphakathi kwesizathu. Ungathola "i-Lumiya" ezitolo ngamabhule angu-14 000. Ukuze uthole ucingo ngalolu hlu lwezimpawu namakhono, lokhu kuyithegi evamile yamanani. Ngakho-ke ungalaleli labo abathinta iqiniso. Noma kunjalo, ngezinye izikhathi singacabanga ukuthi intengo ye-Nokia Lumia 735 ingaphansi kancane. Ngemuva kwalokho, le smartphone iyasiza kakhulu futhi ezithakazelisayo!
Izici kanye nemishini
Isibonelo, kufanelekile ukufunda ngezinye zezici ezingezona ezijwayelekile ze-smartphone nokuqoqwa kwezidingo. Phela, imisebenzi eyengeziwe ivame ukuheha abathengi abaningi.
Kumele uqaphele ukuthi "uLumiya", njengamafoni wonke, iwashi newashi le-alamu. Akukho okukhethekile, ngaphandle kwezwi elikhulu lensimbi. Futhi kulo modeli kukhona ikhalenda enesimiso sezinsuku zonke kanye ne-notebooks. Futhi izici ezijwayelekile. Phakathi kwezinye izinto, i-smartphone ye-Lumia 735 ihlanganisa i-navigator, amabalazwe, ukulawula izwi, ikhampasi, i-gyroscope, i-accelerometer, ukusondelana nokukhanya kwesikrini, ne-flashlight. Ngezinye izikhathi konke kuyasiza kakhulu.
Manje kancane mayelana nesikhwama. Ukuthola "i-Nokia Lumiya", umthengi uthola isethi yonke yezesekeli ezahlukene. Isibonelo, ebhokisini uzothola ishaja, ikhadi lewaranti, kanye nemiyalelo kanye nekhebula lokuxhuma kwikhompyutha (i-USB-wire). Kodwa ngaphezu kwalesi setethi, i-Lumia 735 ivame ukufakwa kwiphakheji evamile: ikhava, ukwesekwa kwefoni, ipenethi, kanye nefilimu evikelayo esikrinini nasekhanda.
Yini esiyithola ngenxa yalokho? Ngokusho kokubuyekezwa okuningi, sekucacile ukuthi "i-Nokia 735" iyinhlangano ye-smartphone enamandla futhi enhle kakhulu. Abathengi abaningi bayaqaphela ukuthi lokhu kuyimodeli yekhwalithi ephakeme kakhulu, evikelekile kahle emanzini, kanye nemithelela.
Njengama-Smartphone amaningi akwa-Nokia, ifoni yethu yanamuhla ngeke iphule, ngisho noma iwa phansi kusuka ku-5 phansi kuya ku-asphalt. Ingabe lokho kuzoba nezinsalela ezincane emzimbeni. Ngamanye amazwi, uma unquma ukuthenga i-Lumia 735, khona-ke ungaqiniseka: ngaphambi kokuthi ube yifoni enamandla kakhulu futhi eqinile ezohlala isikhathi eside.
Njengoba MTS ukuthumela beacons kanye indlela engasiza?